छोटो समयमा नै चर्चा बटुलेका थिए ४२ बर्षिय छेतन! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > छोटो समयमा नै चर्चा बटुलेका थिए ४२ बर्षिय छेतन!
admin September 9, 2020 September 9, 2020 जीवनशैली, समाचार	0
काठमाडौं – लेखक तथा निर्देशक छेतेन गुरुङको असामयिक निधनले फिल्मकर्मी स्तब्ध बनेका छन् । गुरुङको गएराति २ बजे निधन भएको थियो । केही समयदेखि उनी फिल्म ‘हुतुतु’ निर्देशनको तयारीमा थिए । चर्चित कलाकारलाई एउटै फिल्ममा अनुबन्ध गरेका कारण पनि यो फिल्म एकाएक चर्चामा आएको थियो । कलेजोमा समस्या देखिएपछि छेतन दुई दिनअघि राजधानीस्थित मेट्रो अस्पताल भर्ना भएका थिए ।
उपचारका क्रममा ४२ वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको हो । छेतनले कम फिल्ममा मात्र काम गरेका थिए । तर, उनी चर्चित थिए । पछिल्लो समय उनलाई सम्भावना बोकेका निर्देशकका रुपमा लिइन्थ्यो । छेतनले निर्देशन गरेको फिल्म ‘प्रेम गीत ३’ कोरोना भाइरसले सिर्जित अवस्थाका कारण रिलिज हुन सकेको छैन ।
यो फिल्मबाट छेतन निकै आशावादी पनि थिए । तर, उनी फिल्म रिलिजपछि दर्शकको प्रतिक्रिया नपाउँदै विदा भए । सन्तोष सेन समेत निर्देशक रहेको ‘प्रेमगीत ३’ रिलिजअघि नै वर्षभरि चर्चामा आएको फिल्म हो । छेतनले तयारी थालेको फिल्म ‘हुतुतु’ को स्किृप्टमै काम भइरहेको थियो । कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको असहज परिस्थिति सामान्य हुनासाथ फिल्मको छायांकन थालिने तयारी थियो ।
निर्देशक गुरुङले फिल्म ‘डमरुको डन्डीबियो’ बाट पनि राम्रो चर्चा कमाएका थिए । फिल्ममा खगेन्द्र लामिछानेको शीर्ष भूमिका थियो । उक्त फिल्ममा डन्डीबियो खेललाई नेपालमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश थियो । ‘नोभेम्बर रेन, क्लासिक, ‘ए मेरो हजुर ३’ लगायत फिल्मका स्क्रिप्ट तयार पारेका छेतनले ‘डमरुको डन्डीबियो’ निर्देशन गरेपछि ‘प्रेम गीत ३’ निर्देशन गरेका थिए ।
छोटो समयमा नै उनले एकपछि अर्को फिल्ममा काम गरिरहेका थिए । उनी फिल्म रिलिजका बेला दर्शकको प्रतिक्रिया बुझ्नका लागि हलबाहिर प्रायः उपस्थित हुन्थे । दर्शकका प्रतिक्रिया सुन्थे । ‘चलचित्र निर्देशक तथा लेखक छेतन गुरुङको निधनको खबरले निकै दुःखी भएको छु, उहाँको चीर शान्तिको कामना गर्दछु,’ हरिवंश आचार्यले समवेदना प्रकट गरेका छन् ।
निर्देशक दिनेश राउतले छेतनलाई सिर्जनात्मक मान्छे भएको बताएका छन् । ‘कसैको चित्त नदुखाउने स्वभावको मान्छे थियो, सकारात्मक सोच थियो उसमा,’ राउत भन्छन् । निर्माता तथा निर्देशक सन्तोष सेनले छेतनको असामयिक निधनले आफू दुःखी भएको बताएका छन् । छेतनको निधनको खबरले सेलिब्रेटीहरूले दुःख व्यक्त गर्दै समवेदना प्रकट गरेका छन् ।